काठमाडौं ।के तपाई नेपालमै बसेर युरोपियन डिग्री हासिल गर्न चाहनु हुन्छ ? यदि त्यसो हो भने काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा रहेको ‘आइएसटी’ अर्थात इन्टरनेशनल स्कूल अफ टुरिजम एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट कलेज तपाईका लागि सही गन्तब्य हुन सक्छ ।साल्ज बर्ग युनिभर्सिटी अफ एप्लाइड साइन्स् अस्ट्रीयाको सम्बन्धनमा सञ्चालित यस कलेजले न्यून मूल्यमा युरोपियन डिग्री उपलब्ध गराईरहेको छ ।नेपालमा नै उत्कृष्ट हस्पिटालिटी एजुकेशन उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सन् २००४ मा स्थापित यस कलेजले आफूलाई अब्बल कलेजको रुपमा स्थापित गरिसकेको छ । टुरिजम र होटल म्यानेजमेन्ट शिक्षा क्षेत्रमा उदाहरणिय र अनुकरणिय बन्न सफल यस कलेजमा प्लस टु र ब्याचलर लेभलको अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ । टुरिजम र होटल म्यानेजमेन्ट क्षेत्रमा ब्राण्डेड बन्न सफल यस कलेजबाट ५ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीले उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरिसकेका छन् । बाँकी हेरौं यो भिडियोमा :
८ आश्विन २०७७, बिहीबार १२:२५
के तपाई नेपालमै बसेर युरोपियन डिग्री हासिल गर्न चाहनु हुन्छ ? यदि त्यसो हो भने काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा रहेको ‘आइएसटी’ अर्थात इन्टरनेशनल स्कूल अफ टुरिजम एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट कलेज तपाईका लागि सही गन्तब्य हुन सक्छ ।
साल्ज बर्ग युनिभर्सिटी अफ एप्लाइड साइन्स् अस्ट्रीयाको सम्बन्धनमा सञ्चालित यस कलेजले न्यून मूल्यमा युरोपियन डिग्री उपलब्ध गराईरहेको छ ।
नेपालमा नै उत्कृष्ट हस्पिटालिटी एजुकेशन उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सन् २००४ मा स्थापित यस कलेजले आफूलाई अब्बल कलेजको रुपमा स्थापित गरिसकेको छ । टुरिजम र होटल म्यानेजमेन्ट शिक्षा क्षेत्रमा उदाहरणिय र अनुकरणिय बन्न सफल यस कलेजमा प्लस टु र ब्याचलर लेभलको अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ । टुरिजम र होटल म्यानेजमेन्ट क्षेत्रमा ब्राण्डेड बन्न सफल यस कलेजबाट ५ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीले उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरिसकेका छन् । बाँकी हेरौं यो भिडियोमा :
Prevजिपी कोइराला फाउण्डेशन र इन्स्टिच्युट अफ रबर रिसर्चबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
अझै तीनदिन देशभर वर्षा हुनेNext